ROTI भनेको के हो? | Martech Zone परिवर्णी शब्द
Martech Zone » परिवर्णी शब्द » आर बाट सुरु हुने परिवर्णी शब्द	» ROTI
ROTI परिवर्णी शब्द
ROTI को संक्षिप्त रूप हो प्रविधि लगानीमा फर्कनुहोस्.
लगानीमा फिर्ता (ROI) जस्तै, यो प्रविधि वा सफ्टवेयर इजाजतपत्रमा लगानी गर्न लाग्ने समयको मात्रा हो जसलाई लागू गर्न लाग्ने राजस्वको रकम फिर्ता गर्न। उदाहरण: यस प्लेटफर्ममा लगानी गर्दा औसत ग्राहकको लागि ७ महिनाको ROTI हुन्छ। यसलाई प्राप्त राजस्व मा प्रतिशत वृद्धि मा पनि मापन गर्न सकिन्छ